2019 kacha mma na-ere ọkụ Chinese ngwaahịa keychain
Nkọwa:Bestchain Selling Keychain,Onye na-ekpocha chacha achacha chaa chaa,Nkọwapụta Ọnụahịa Keychain
Home > Ngwaahịa > Onyinye Silik > Mpịcha Keychain Silik > 2019 kacha mma na-ere ọkụ Chinese ngwaahịa keychain
Ihe Nlereanya.: K-004
Shenzhen Mara mma Earth Technology Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ nke mara mma na onyinye onyinye ma nwee ahụmahụ afọ 10 na-elekwasị anya na ịpịpụta keychain silik . Ugbu a, anyị nwere ọganihu, nke ọma na nlezianya na-arụ ọrụ, ọrụ magburu onwe ya na-arụ ọrụ na nkà na ụzụ nke mbụ, nke na-eme ka anyị nwee ike ịmepụta nnukwu mkpuchi silikoni . Anyị ji n'aka na ị ga-enwe afọ ojuju na keychain silicone dị ka ụdị na-esonụ, silicone pvc keychain na logo.
Onu ogugu Silicone ọ bụla nwere atụmatụ ndị a:
The keychain silik na-adaba n'ụzọ dị mma maka igodo ụgbọ ala gị . na keychain pvc dị mma nke igodo ụgbọ ala na-esonụ, nwee olileanya na ịhọrọ ụdị ndị kwesịrị ekwesị. Anyị nwere ọnụahịa uru nke mkpado akpa akpa ma ọ bụrụ na i nwere nnukwu.
kuki igodo silicone adịghị emerụ ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mma na gburugburu ebe obibi. Mgbe ị na-ejide keychain Silicone n'aka gị, ọ na-adị nro, dị mma na ìhè. Ị ga-ahụ keychain key pvc mgbe ị nwere ya.
Anyị nwere ike ịme ihe ọ bụla na-eme ka a na-agbanye àgwà nke Silker keychain dịka ihe ị chọrọ gbasara anyị Oke mkpuchi silik .
Oke ihe nkedo silik nwere njirimara nke enweghi ihe ojoo, mmekorita gburugburu ebe obibi, ihe ngbochi onu ogugu, ihe siri ike, ihe mmiri na-ekpuchi, uzuzu
A na -emepụta keychain silikal site na-eme ihe atụ maka ịkwado ụji mmiri, usoro niile anyị na-eme na-arụ ọrụ site n'onwe anyị.
1. 1. Silicone VW Car Key akpa na akpa akpa
2. 1000pcs Silicone VW Akpa akpa akpa n'ime otu katọn
Ngwaahịa : Onyinye Silik > Mpịcha Keychain Silik
100% Eco Friendly Mixed colors 2018 free keychain Kpọtụrụ ugbu a
2018 Amazon ọkụ ahịa ngwaahịa omenala keychain Kpọtụrụ ugbu a
2019 kacha mma na-ere ọkụ Chinese ngwaahịa keychain Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ redio ryhx 2018 na-ere Nlekọta Keychain Kpọtụrụ ugbu a
2018 ngwa ngwa ọhụrụ ngwaahịa silicone pvc keychain Kpọtụrụ ugbu a
2018 Ụdị ihe eji emepụta nri ọhụrụ nke nri ọhụrụ Kpọtụrụ ugbu a
2018 ọhụrụ nkà na ụzụ na nkà mmụta sayensị Germany Kpọtụrụ ugbu a
2018 ọhụrụ mepụtara omenala keychain Kpọtụrụ ugbu a
Bestchain Selling Keychain Onye na-ekpocha chacha achacha chaa chaa Nkọwapụta Ọnụahịa Keychain Best Selling Wristband Kwado Silikoni Keychain Nkwado Silikoni Keychain ODM Silicone Keychain Obere mkpuchi Silicone Keychap